Kortni फोर्ड - फिलिम र टेलिभिजनको एक अमेरिकी अभिनेत्री। ख्याति र गुप्तचर श्रृंखला "Dexter" र टिभी श्रृंखला मा क्रिस्टिनले हिल को उनको भूमिका ल्याइएको थियो "अलौकिक।"
टेलिभिजनमा, Kortni फोर्ड यसको debut 2000 मा, अपराध नाटक "हत्यारा प्रोफाइल" मा एक cameo भूमिका देखा गरे।
अझै एक विदेशी आक्रमण को विषय मा अर्को फिलिम मिलाइएको - 2008 मा, अभिनेत्री को काल्पनिक विज्ञान हरर फिल्म "विदेशी हस्तक्षेप" मा तारा अङ्कित। फिल्म बेन रक को directorial debut भयो। फिल्म देखि तटस्थ प्रतिक्रिया ज्यादातर दर्शक जित्यो।
2009 मा, Kortni फोर्ड क्रिस्टिनले हिल को वर्ण टेलिभिजन श्रृंखला मा "Dexter," embodied उपन्यास "अंधेरे में Dreaming Dexter" मा आधारित। यो भूमिका लामो-प्रतीक्षा Courtney लोकप्रियता ल्याएको छ छ। फिलिम समयमा, अभिनेत्री यस्तो माइकल सी हल, Loren Veles र रूपमा ताराहरू काम छ जेनिफर कर्मी।
2011 मा, Courtney ", साँचो रक्त" को रहस्यमय नाटक मा पोर्टिया प्ले Charlaine हैरिस द्वारा उपन्यास को एक श्रृंखला आधारमा। यो श्रृंखला संसारभरि प्रशंसक प्राप्त गरेको छ र "एमी" पुरस्कार र "गोल्डन ग्लोब" सहित धेरै प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
त्यसै वर्ष मा रोमाञ्चक "असल डाक्टर" संसारमा रोलिङ आए। मुख्य चरित्र, डा मार्टिना Bleyka, यो ओर्लान्डो Blum प्ले, र स्टेफनी Kortni फोर्ड रूपमा एउटा सानो भूमिका मिल्यो। ओरलैंडो ब्लूम को सहभागिता साथ चलचित्रहरू सामान्यतया दर्शक संग सफलता बर्बाद छ, तर यो मामला थिएन। एक विज्ञापन अभियान को कमी फाइदाको मा एक तस्वीर प्राप्त भएन र यसको बक्स कार्यालय केही सिके।
एक नाटकीय टेलिभिजन श्रृंखला मा "आमाबाबु" एनबीसी गरेको Kortni फोर्ड पनि लिली को एक सानो भूमिका खेलेका। यो श्रृंखला न्यानो आलोचकहरु द्वारा प्राप्त र साधारण moviegoers लोकप्रिय भयो गरिएको छ। कुल मा7लाख दर्शकहरूलाई देख्यो।
नोभेम्बर 2007 मा, Courtney अभिनेता ब्रैंडन रूट, टिभी श्रृंखला "भोलि परभक्षी" र "भागीदार" बाट दर्शकहरूलाई ज्ञात विवाह गरे।
2012 मा, जोडी पहिलो बच्चा जन्मेको - लियो Dzheyms Rut को छोरा।
क्राउन प्रिन्स फ्रेडरिक - डेनमार्क भविष्य राजा
अभिनेत्री बारबरा Brylska। छोरी बारबरा Brylska: जीवनी, शोकमा
Anzhelina Dzholi मेकअप बिना: मेकअप र बनौटको मद्दत बिना पत्नी Breda पित्त जस्तो देखिन्छ?
Amphibious वाहन - सेना र नागरिक को सेवक
बताउन कसरी आफ्नो पति परिवर्तन भने?
पालुङ्गो कसरी खाना पकाउनु
पूर्वोत्तर कर्ड: मास्को मा राजमार्ग
Torrents देखि खेल डाउनलोड कसरी: निर्देशन
सही स्की जूता कसरी चयन गर्ने? स्की बुट को आयाम
एक ठगी कसरी लेख्न बारेमा प्रहरी कथन?
जीवनी Katie Adushkin, कान्छो र सबैभन्दा सफल videblogerov एक